Xaashiyaha Caagga ah ee Caagga ah ee PP, Sanduuqa Caagga ah ee Caagga ah ee PP, Sanduuqyada Xirmooyinka Caagga ah - Orodka
Wax soo saarka dhismaha
Xaashiyaha Dib-U-Haynta Flame
Imtixaanka xaashida ESD
Cabitaanka iyo biyo dhalada ku jira
Balastarka lakabka caagga ah
Adeegga OEM ee Adeegga Naqshadeynta Adeeg Bixinta
Shandong Runping Plastic Co., Ltd waa hal warshad oo casri ah oo loogu talagalay xaashiyaha caaga ah ee 'PP' iyo sanduuqyada wax lagu duubo ee caaga ah oo ay la socdaan ISO 9001: 2008 & Xaqiijinta RoHs ee magaalada Weifang, gobolka shandong, Shiinaha.
Xakameynta dhawaaqa iyo kuleylka kuleylka
Sababtoo ah qaab dhismeedka godka ah ee xaashida bannaan ee caagga ah, kuleylkiisa iyo saameyntooda gudbinta dhawaaqu aad ayey uga yar yihiin kuwa xaashi adag. Waxay leedahay dahaarka kuleylka wanaagsan iyo waxyeelada codka.
Midda hore waa in qiimaha walxaha caagga ah ee bannaan ay ka yar yihiin agabyada kale. Waxay si weyn u badbaadin doontaa kharash badan inta lagu gudajiro hawsha iibsashada alaabada ceyriinka ah ee alaabada la dhammeeyay.
Waa muhiim in la ogaado in agabyada bay'ada u habboon ay ka welwelsan yihiin adduunka oo dhan. Xaashiyaha PP hollow ma ah sun iyo wax aan wasaqayn, waxaana dib loo warshadeyn karaa oo dib loo isticmaali karaa si loogu sameeyo alaabooyin kale oo caag ah.
Waxaan rajeyneynaa inuu macaamil walba la lahaado horumar ganacsi oo wanaagsan! Ku soo dhowow inaad booqato warshadeena!
Shandong Runping Plastic Co., Ltd. waa hal warshad oo casri ah oo loogu talagalay xaashiyaha caaga ah ee 'PP' iyo sanduuqyada wax lagu duubo ee caaga ah oo ay la socdaan ISO 9001: 2008 & RoHs xaqiijinta magaalada Weifang, gobolka shandong, Shiinaha. Shirkaddeena ayaa leh 11 xarumood oo horumarsan oo ka sameysan balaastig balaaran oo caag ah iyo 3 aqoon isweydaarsi, awooda waxsoosaar sanadeedka ee guddiga sare ee caaga ah oo tayo sare leh wuxuu gaarayaa 10000Ton. Waxaan helnay shahaadada ISO 9001: 2008 iyo xaqiijinta RoHs.Waxaan bixinaa 24 saac kadib iibinta adeegga. Waad noo soo wici kartaa wakhti kasta (86–13355279991) ama waad noo soo diri kartaa boostada; macaamiil! Ku soo dhowow inaad soo booqato warshadeena!
KU SOO DHAWAADA DALKA
Xiriirinta: www.rpplast.cn bestcoroplast.com
Arimaha la doonayo in lagu xuso iibsashada boodhka caaga ah
Hordhac kooban oo ku saabsan boodhka caagga ah
Xafiiska Shiinaha ： NO.13887, weifang zone wershaang, shandong, Shiinaha
Xafiiska Usa ： cinwaanka ugu fiican ee twinwall plast address: 8605 santa monica blvd # 79525 west hollywood california 90069-4109 usa
Telefoon: 0086 13355279991